भारतमा मार्च यताकै सबैभन्दा धेरै सङ्क्रमित फेला - Khabar Muluk
भारतमा मार्च यताकै सबैभन्दा धेरै सङ्क्रमित फेला
[ फाेटाे : Migrant workers walk to boardaspecial train to return to Agra in Uttar Pradesh state, duringanationwide lockdown to curb the spread of new coronavirus, atarailway station in Ahmedabad, in the western Indian state of Gujarat, Saturday, May 2, 2020. India on Friday ran the first train service for thousands of migrant workers desperate to return home since it imposedanationwide lockdown to control the spread of the coronavirus. Several states, including Rajasthan, Jharkhand, Bihar, Kerala, Maharashtra, Uttar Pradesh, Punjab and Telangana have demanded special trains for returning workers because they couldn't arrange enough buses. Around 1 million migrant workers from Uttar Pradesh are still stranded in other Indian states, state government spokesman, Awanish Awasthi said. (AP Photo/Ajit Solanki) ]
भारतमा फेरि कोरोनाको त्रास बढेको छ । पछिल्लो २४ घण्टामा ४ हजार २५७ नयाँ सङ्क्रमित फेला परेका छन् । यो सङ्ख्या मार्च ८ यताकै उच्च हो । त्यसपछि त्यहाँ द्धछठछ केसहरू थिए। यो महिनामा नयाँ सङ्क्रमितको सङ्ख्या ४ हजार नाघेको यो दोस्रो पटक हो । यसअघि जुन २ मा देशमा ४ हजार ४१ जनाको रिपोर्ट पोजेटिभ आएको थियो ।
शनिबार १५ सङ्क्रमितको मृत्यु भएको छ भने २६१२ निको भएका छन् । हाल २२ हजार ६ सय ९१ जनाको उपचार भइरहेको छ । महामारीको यो युगमा देशमा ४ करोड ३१ लाख मानिस कोरोना सङ्क्रमित भएका छन् । जसमध्ये ४।२६ करोड निको भएका छन् भने ५.२४ लाखले ज्यान गुमाएका छन् ।
केरलामा सबैभन्दा धेरै सङ्क्रमण देखिएको छ । यहाँ शनिबार १ हजार ४ सय ६५ जनाको कोरोना रिपोर्ट पोजेटिभ आएको छ । ७ बिरामीको मृत्यु भएको छ भने ६ सय ६७ निको भएका छन् । हाल ७४२७ सक्रिय केस छन्, अर्थात् यति धेरै सङ्क्रमितको उपचार भइरहेको छ । राज्यमा सबैभन्दा बढी ९.८७५ पोजिटिभ दर छ अर्थात् प्रत्येक १०० परीक्षणमा १० जनामा ​​पोजेटिभ देखिएको छ ।
प्रकाशित मिति : जेठ २२, २०७९, आइतवार ०७:०८ बजे